Maalgashiga - Saameynta Saameynta
Iyada oo ah agaasimaha maalgashiga McKnight tan iyo 2019, Elizabeth McGeveran ayaa kormeereysa kooxda maamusha deeqda $3 ee Aasaaska. Iyada oo hoggaankeeda iyo aragtideeda leh, Mu'asasaddu waxay ka go'an tahay inay gaarto qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ku baahsan dhammaan faylalka ay leedahay ama ka hor 2050 -kii ugu horreeyey ee 50 -ka aasaas ee gaarka loo leeyahay ee ugu weyn. McGeveran wuxuu naqshadeeyay faylal-ku-saleysan xalka suuqyada oo la jaan qaada himilada Aasaasiga, hormarinta xallinta cimilada, iyo bulshooyinka iyo dhaqaalaha siman. Dhammaan deeqda, mid kasta oo ka mid ah saddexdii doolar ee la maalgeliyeyba waa mid ku-meel-gaar ah.
McGeveran wuxuu markii ugu horreysay ku biiray McKnight 2014 si uu u hoggaamiyo saameynta barnaamijka maalgelinta. Waxay gacan ka geysatay in loo gogol xaadho Mu'asasada oo ah maalgashade saamayn ku leh, aqoonsiga fursadaha maalgashi ee dhisaya dunida aan rabno inaan ku noolaano. Hoggaamiye maalgashi ilaa 1999kii, McGeveran oo ay weheliyaan kuwa kale ayaa ahaa jilaa hore oo horumarinaya arrimaha bulshada iyo maamulka deegaanka (ESG ) hababka warshadaha oo dhan. Iyada oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee maamulka iyo maalgashiga waara ee Maaraynta Hantida F&C, oo ah maareeyaha hantida ganacsi ee fadhigeedu yahay London (hadda waa BMO Global Asset Management), waxay dhistay kooxdan maalgashi bulsho ee mas'uul ka ah suuqa.
McGeveran waa wakiil madaxbannaan oo lacag ah oo ka tirsan Boston Trust Walden, oo ah hoggaamiye muddo dheer ku soo daray ESG qaabkeeda maalgashi. Iyadu waa xubin asal ah oo ka tirsan Guddiga La -talinta Mareykanka ee tilmaamayaasha FTSE4Good, iyo hadda mutadawiciin ka ah guddiga maalgashiga Jaamacadda St. Thomas ee magaaladeeda St. Paul. McGeveran wuxuu ku koray banaanka Boston wuxuuna ka qalin jabiyay Kulliyadda Carleton ee Minnesota.
By Elizabeth McGeveran Febraayo 2016
By Elizabeth McGeveran Juunyo 2015
By Elizabeth McGeveran Janaayo 2015